दमक नगरपालिकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित बाँध निर्माणगर्दा कमल गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा ठुलो क्षती – कमल खबर
Home/मुख्य समाचार/दमक नगरपालिकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित बाँध निर्माणगर्दा कमल गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा ठुलो क्षती
दमक नगरपालिकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित बाँध निर्माणगर्दा कमल गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा ठुलो क्षती
२०७७ श्रावण २०, मंगलवार १६:२२ गते
कमल । कमल गाउँपालिका र दमक नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने रतुवा खोलामा दमक नगरपालिकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित वाँध निर्माण गरेपछि त्यसको असर कमल गाउँपालिकामा परेको छ ।
नगरपालिकाले एकलौटी रुपमा रतुवा नदिमा बाँध निर्माण गरेपछि नदिले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको छ जसका कारण कमल गाउँपालिका को वडा नम्वर ५ र ६ मा ठुलो असर पुगेको स्थानिय बताउछन् ।
हाल दमक नगरपालिकाले बाँध निर्माण गरेको स्थान भन्दा २ सय मिटर पश्चिम बाट रतुवा नदि बग्थ्यो । नगरपालिकाले हरेक वर्ष एकलौटी रुपमा बाँध निर्माण गरेर ४ सय मिटर मा बग्ने नदि लाई १ सय ५० मिटरमा ल्याएपछि नदिले आफ्नो धार परि बर्तन गरेका कारण कमल गाउँपालिकाको वडा नम्वर ५ र ६ वडामा थुलो क्षति भएको स्थानिय हिमाली टोल विकास सस्थाका अध्यक्ष एलवि विष्टले बताउनु भयो ।
अहिले देशमा कालापानि र लिपुलेकको ठुलो चर्चा छ । त्याहाँको झल्को हेर्न दमक नगरपालिकाले रतुवा नदीमा बाधेको बाँध हेरे पुग्छ । नगरपालिकाले सिमाना मीचेर बाध बाधेको छ । दमकले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित वाँध निर्माण गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नगरपालिकाले नियोजित रुपमा खोलामा बाँध निर्माण गरेकोले त्यसको परिणाम हामिले व्यहोर्नु परेको कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ५ का स्थानिय टिका सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
पहिले नदीको बग्ने गरेको ठाउँ देखाउदै वडा अध्यक्ष सहितको टोली
यो समस्य आजको मात्र होईन २०४० साल देखी कै हो । यस विषयमा हामि जनप्रतिनिधी हुनु भन्दा पहिले पनि धेरै पटक छलफल गरेका थियौं तर त्यसको सुनवाई भएन । अहिले हामी जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएका छौं ।
त्यसपछि पनि नगरपालिका संग पटक पटक यो विषयमा कुरा भयो तर पनि सुनवाई भएको छैन । नगरपालिकाले बाध बाँधेर नदिलाई दुई सय मिटर भन्दा वर ल्याएको छ जसरका कारण नदिले कमल गाउँपालिका लाई ठुलो क्षति पुर्याको छ । नगरपालिकाले हाम्रो कुरालाई वास्तै नगरी नियम विरित लन्चिङ्ग र स्पाम निर्माण गरेपछि यस्तो समस्य आएको कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष डम्वर बहादुर निरौला बताउनुहुन्छ ।
नगरपालीकाले नियम विपरित निर्माण गरेको स्पाम
दमक नगरपालिकाले रतुवा नदिमा एकलौटी रुपमा निय विपरित बाँध बाँधेका कारण कमल गाउँपालिकाका जनतालाई यस्तो समस्या आएको हो । यस वर्ष आएको वाढकिा कारण कमल गाउँपालिकाको ५ र ६ नम्वर वडाको लगभग १० विघा भन्दा बढी जमिनमा नदिले कटान गरेको स्थानिय बताउछन् ।
यसको दिर्घकालिन समाधानकालागी दुवै तर्फका स्थानिय तहका प्रमुख विच सहकार्य र छलफल हुन आवश्यक छ । तव मात्र यसको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्छ । उमानाथ भण्डारी
तोपगाछी को पैचान झल्किने तोप र गाछी सहितको गोल चकरको उद्घाटन
जङ्गली हात्तिका कारण गएराती झापाको कमल गाउँपालिकामा एक वृद्धाको मृत्यु